2Bdrm Cttge HalfwayLake, Barry'sBay - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMatuesz
Ubunewunewu obutofotofo kubunzulu bendalo yasendle yaseCanada. Abakhenkethi yiparadesi eneendledlana ezininzi ezikhokelela kukhangelo olumangalisayo. Idokhi kunye nokufikelela emanzini kukwindawo encinci ethe cwaka neyimfihlo echibini apho unokunyamalala khona iiyure. Zonke izinto eziluncedo zikufutshane.
Kwi-Halfway Lake (eyaziwa ngokuba yiLong Lake), sifumaneka kwimizuzu eyi-10 emazantsi eBarry's Bay, eOntario, indawo eyaziwayo neyaziwayo yaseMadawaska Valley. Sikwingingqi yaseKaszuby kwiNtlambo, indawo yokuqala yokuhlala yasePoland eCanada. I-cottage ivaliwe, ijikelezwe lihlathi ukusuka emazantsi, empuma, entshona, naseHalfway Lake ukuya emantla.
Siyakuqinisekisa ukuba uyakonwabela ukujonga iinkwenkwezi okungangxengwanga, ukuphuma kwelanga okumangalisayo, kwaye uphumle emoyeni nakwiminxeba ye-loon.
Igumbi lokulala elinomgangatho ophantsi olungiselelwe kakuhle. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulukazi ejonge echibini-- ukubamba ukuphuma kwelanga okuhle! Igumbi lokulala lesibini linebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye. Imigangatho yeenkuni ezifudumeleyo kunye neendonga, ezifumana ukufudumala usebenzisa isitovu esikhulu somthi kwigumbi lokuhlala. Iinkonzo zeendaba ezipheleleyo zala maxesha eziquka i-LCD kamabonakude, isidlali seDVD, kunye nenkqubo yesithethi esikwaziyo iPod ene-subwoofer. Iisofa ezitofotofo zenza kube lula ukuphumla okanye ukonwabisa, kukwakho nebhedi yesofa enkulu yaseYurophu. Ikhitshi eligcweleyo elinetafile, isitovu esikhulu kunye nefriji, indawo eninzi yekhabhathi. Igumbi lokuhlambela libonisa ishawari yeglasi enkulu, ibhafu yesoaker, isinki yangoku kunye newasha + isomisi- uya kuyithanda imigangatho yeethayile ezishushu kusasa! I-BBQ enkulu kwidesika egqunyiweyo ngasemva; Umgangatho ongaphambili unombono omangalisayo weHalfway Lake. Sinegumbi lomlilo ukuze ukonwabele umlilo wangokuhlwa kwaye ujonge inkwenkwezi.
Kukho ukuqubha kwidokhi enkulu eHalfway Lake, okanye zininzi iilwandle ezintle ezikufutshane. Unokuhamba ngeendlela ezininzi ezisuka kwi-Channonhouse Road kunye ne-Old Barry's Bay Road ukuze uhambe ngeenyawo, uhambe, uhambe ngekhephu, okanye uqabelise ikhephu. Ukutyibilika ezantsi kwentaba kungaphantsi kwemizuzu emi-5.
Iingcebiso zomntu: Ndwendwela iBarry's Bay Dairy (eyaziwa ngokuba yiThe Greasy Spoon) ngesidlo sakusasa ngenye intsasa (nangona benza iSidlo sasemini esikhulu kunye neSidlo sangokuhlwa kakhulu!) ukupheka isidlo sakudala -- intsomi yasekuhlaleni!
Siyathemba ukuba uya kuza kwaye ukonwabele enye yeendawo esizithandayo eCanada!
4.81 out of 5 stars from 246 reviews
4.81 · Izimvo eziyi-246
Umbuki zindwendwe ngu- Matuesz
I am in the Television Industry, Polish born and a Kaszuby raised boy scout.
Ndihlala ndifumaneka efowunini , ukuba kukho imfuneko ndiyakwazi ukuba nomntu kwipropati kwimizuzu engama-30. Ukungena ngekhowudi yomnyango eya kubonelelwa ngosuku olungaphambi kokufika kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barry's Bay